အင်တာနေရှင်နယ် (သီချင်း) - ဝီကီပီးဒီးယား
လက်ဝဲဝါဒီ အမျိုးသားရေး သီချင်း
အင်တာနေရှင်နယ် (ပြင်သစ်: "L'Internationale") သည် လက်ဝဲစွန်းရောက် အမျိုးသားရေး သီချင်း ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ အင်တာနေရှင်နယ် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီးချိန် ၁၉ရာစုနှစ်နောင်းပိုင်း ဆိုရှယ်လစ် လှုပ်ရှားမှုများ အတွက် အမျိုးသားရေး သီချင် တစ်ပုဒ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမ အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းမှာ ၁၈၆၄ခုနှစ် တွင် ကျင်းပသော ပြင်သစ် အလုပ်သမား ကွန်ဂရက်မှ တစ်ဆင့် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အင်တာနေရှင်နယ်အား ရေးသားခဲ့ သူမှာ ယင်း ကွန်ဂရက်အား တက်ရောက်သူ တော်လှန်ရေးသမား ယူဂျင်း ပေါ်တီယဲ ဖြစ်သည်။
မူရင်း ပြင်သစ် ဗားရှင်းဖြစ်သော "L'Internationale"
အမျိုးသား anthem of
ဆိုရှယ် ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု
ယူဂျင်း ပေါ်တီယဲ, ၁၈၇၁ ခုနှစ်
ဖြဲဒီဂေးတာ, ၁၈၈၈ ခုနှစ်
သီချင်း၏ မူရင်း ပြင်သစ်အမည်မှာ C'est la lutte finale / Groupons-nous et demain / L'Internationale / Sera le genre humain ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ် လိုအားဖြင့် "This is the final struggle / Let us group together and tomorrow / The Internationale / Will be the human race." အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်သည်။ အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းအား ဘာသာစကားပေါင်း များစွာသို့ ပြန်ဆိုထားသည်။အင်တာနေရှင်နယ် သီချင်းအား မင်းမဲ့စရိုက် ၊ ကွန်မြူနစ်များ ၊ ဆိုရှယ်လစ်များ ၊ ဒီမိုကရေစီဆိုရှယ်လစ် များနှင့် ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက် လှုပ်ရှားမှုများတွင် အသုံးပြုကြသည်။
၁၉၄၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ရက်နေ့ မတိုင်ခင် အထိ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ၏ အမျိုးသား နိုင်ငံတော် သီချင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ထို့ပြင် ယင်းမတိုင်မီက၎င်းကို တရုတ်ဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံ ၊ Bavarian ဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံ ၊ စလိုဗက်ဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံ နှင့် ဟန်ဂေရီဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံတို့ကနိုင်ငံတော်သီချင်းအဖြစ်အသုံးပြု ခဲ့သည်။
မူရင်း သီချင်း စာသားပြင်ဆင်
Égaux, pas de devoirs sans droits.
Let us fan our forge ourselves
The State oppresses and the law cheats.
Tax bleeds the unfortunate.
No duty is imposed on the rich;
The rights of the poor is an empty phrase.
Enough languishing in custody!
Equally, no duties without rights.
The kings of the mine and of the rail.
By ordering that they give it back,
Stocks in the air, and break ranks.
Are for our own generals.
The great party of labourers.
The earth belongs only to men;
The idle will go to reside elsewhere.
How much of our flesh have they consumed?
Disappear one of these days,
The sun will still shine forever.
↑ Nic Maclellan။ Louise Michel: Rebel Lives။ Ocean Press။ pp. 7, 89။
↑ Donny Gluckstein။ Decyphering ‘The Internationale’။
↑ The International Anarchist Congress, Amsterdam, 1907။
အင်တာနေရှင်နယ် (သီချင်း) နှင့်ပတ်သက်သမျှကို
Commons မှ မီဒီယာများ
အိုင်အမ်ဒီဘီပေါ်ရှိ The Internationale (2000 documentary)
အခြား ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်သော အသံဖိုင်များ
"The Internationale": lyrics and tabs
ဘာသာစကား ၄၀ ကျော် ပါဝင်သော ဒေါင်းလုတ်နိုင်သော အသံဖိုင်များ
အင်တာနေရှင်နယ် (မြန်မာ) ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ
Piano arrangements and orchestral MIDI file of "The Internationale"
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အင်တာနေရှင်နယ်_(သီချင်း)&oldid=729263" မှ ရယူရန်
၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၁:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၁:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။